Inona no atao hoe CTO? | Martech Zone fanafohezan-teny
Martech Zone » fanafohezan-teny » Fanafohezana manomboka amin'ny T	» CTO
CTO no fanafohezana ny hoe Chief Technology manamboninahitra.
Ny lehiben'ny teknolojia, ny lehiben'ny teknika, na ny lehiben'ny teknolojia, dia toeran'ny mpanatanteraka ao amin'ny orinasa iray izay mifantoka amin'ny fitantanana, ny fampiharana ary ny fahitana ny fampiasana teknolojia ao anatin'ny fikambanana iray ny asany. Ity andraikitra ity dia antsoina indraindray hoe CIO.
CTO no fanafohezana ny hoe Tsindrio Hanokatra.
Ny tahan'ny click-to-open dia ny isan'ny kitika amin'ny isan'ny mailaka misokatra fa tsy ny isan'ny mailaka nalefa. Ity metrika ity dia manome valiny momba ny fomba nifandraisan'ny famolavolana sy ny hafatra tamin'ny mpihaino anao satria avy amin'ny olona tena nijery ny mailakao ihany ireo kitika ireo. Fanafohezana iray hafa dia ny CTOR.